नि’र्दयी को’रो’नाले उमेर पनि हेरेन: कोरोना लागेर ४ वर्षीय बच्चाको नि’धन
महोत्तरीको मनरा सिस्वा गाउँपालिकाकी ४ बर्षीया बालिकाको कारोना संक्रमणका कारण मृ’त्यु भएको छ । उच्च ज्व’रो र सा’स फे’र्न स’मस्या भएपछि बालिकालाई तीन साताअघि धरानको बीपी कोइराला स्वा’स्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको थियो ।
गत २३ साउनमा उपचारकै क्रममा उनको स्वा’ब सं’कलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनलाई आ’इ’सो’लेसनमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा भदौ १४ गते आइतबार दिउँसो मृ’त्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले जानकारी दिए । यो पनि पढ्नुहोस्:
पछिल्लो नेकपा विवादमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको साथ् छाडेर मन्त्री पद जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ् दिएको आरोप लागिरहेका बेला भट्टराईले खुलेरै ओली बाहेक अरूलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । माधव नेपालको साथ छोडेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई किन साथ दिनुभयो त ?
भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ’अब मैले केपी ओलीलाई साथ नदिएर यो संसदीय पोलिटिक्समा शेरबहादुर देउवालाई साथ दिन त मिलेन नि ? म त केपी ओलीको पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुँ । नेकपाको मन्त्री हुँ । त्यो पार्टीको सदस्य हुँ । मैले उहाँलाई साथ दिन्छु नि ।’पाथीभरा पोष्टबाट साभार
Prevकोरियामा काम गर्ने मनकाजी अहिले नेपालमै आएर ११ सय कालिज पाल्दै: हेर्नुहोस कती कमाउँछन (भिडियो सहित्)
Next“म पुरै खुलेर भन्छु, मेरो समर्थन केपी ओलीलाई मात्रै छ अरूलाई छैन”: मन्त्री योगेश भट्टराई